Mbola Notànana Ireo Mpiaro Ny Zon’Olombelona Any Torkia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2017 5:22 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Ελληνικά, عربي, English
Nosamborina tamin'ny herinandro lasa ny valo tamin'ireo mpiaro ny zon'olombelona nohajaina indrindra aoTorkia, miaraka amin'ny mpampiofana teknolojia vaovao miisa roa avy any Soeda sy Alemaina. Mbola tazomina any amin'ny polisy izy folo voasambotra ireo kanefa mbola tsy nisy ny fanamelohana azy ireo ho nanao heloka bevava.
Nitatitra ny gazety Tiorka Cumhuriyet fa nisava ny tranon'ny sasany tamin'ireo mpiaro ny zon'olombelona izay voasambotra ihany koa ny polisy, ary naka boky, kapila CD, finday ary fitaovana nomerika. Tamin'ny 11 Jolay, nitatitra ny Hurriyet Daily News fa “mbola mitohy fisavana ny tranon'ireo nosamborina .”
Nanambara ny Amnesty International tamin'ny 11 Jolay fa mbola hotazomina mandritra ny fito andro fara fahakeliny ireo olona miisa folo.
Namaritra ny fisamborana ho “fanararaotam-pahefana hafahafa sy nanasongadina ny toe-javatra mampiahiahy atrehan'ireo mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona ao amin'ny firenena” ny lehiben'ny Amnesty International Salil Shetty.
Nanoritsoritra ny zava-misy ho “famoretana vaovao avy amin'ny fanjakana Tiorka,” i Hugh Williamson, lehiben'ny Fanaraha-maso Ny Zon'Olombelona any Eoropa sy Azia Afovoany ary nitaky ny famotsorana azy ireo avy hatrany.
Rehefa nanontaniana momba ny fisamborana ny Filoha Tiorka Recep Tayyip Erdogan nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 8 Jolay tao amin'ny Fihaonana An-tampony G20 tao Hamburg, Alemaina, dia nilaza izy fa “inoana fa hanaovana ny tohin'ny hetsika tamin'ny 15 Jolay ” ny fivorian'ireo mpikatroka izany hoe mikasika ny fikasana hanongam-panjakana tsy nahomby tamin'ny taona 2016 no tiany hambara tamin'izany.
Tao anatin'ny sioka amin'ny anaran'ny ekipany, nampahatsiahy ny ezaka nataony ny Amnesty International mba hiarovana an'i Erdogan rehefa nosamborina tamin'ny taona 1998 izy nandritra ny naha-ben'ny tanànan'i Istanbul azy.
Nanatevin-daharana ny antso famotsorana ny mpikambana Holandey ao amin'ny Parlemanta Eoropeana Kati Piri:
Nampiasa ny Facebook ireo mpanohana ny mpiaro ny zon'olombelona mba hizarana ny vaovao farany sy ny vaovao momba ny vondrona amin'ny alalan'ny Avotsory ny Mpiaro ny zon'Olombelona – vondrona Hak Savunucularına Dokunma. Tao amin'ny Twitter, nampiasa ny tenirohy # HakSavunucularınaDokunma, #AvotsorynyMpiaronyZonolombelona sy # Istanbul10 ireo mpanohana mba hizarana vaovao.
Namoaka fanambarana ihany koa ny Fikambanana Manerantany Manohitra ny Fampijaliana izay efa nosoniavin'ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona miisa 40 manerana izao tontolo izao, milaza fa “tsy tokony hatao heloka bevava ny asan'ny zon'olombelona” ary mitaky ny famotsorana avy hatrany tsy misy fepetra ireo mpandray anjara notànana miisa folo .